फरकधार / माघ ६, २०७६
के नेपाली युवाको अध्ययन गर्ने मनोविज्ञान हराएकै हो ? के नेपाली युवाको अध्ययन गर्ने जोश हराएकै हो ?
एकथरिलाई लाग्दो हो, यो एमसिसी भनेको त दातृ संस्थाले बुझाउनु पर्ने कुरा हो । अर्कोथरिलाई लाग्दो हो, यो सरकारले बुझाउनु पर्ने विषय हो । मलाई चाहिँ यी दुवै कुरा लाग्दैन । मलाई त के लाग्छ भने यो कुरा युवाहरु आफैंले बुझ्नु पर्ने हो । के युवाहरुले यसबारे अध्ययन गर्नु पर्ने होइन ?
विडम्बना ! हाम्रा प्रोफेसरहरु, हाम्रा विश्वविद्यालयहरु यस्ता विषयमा बोल्दैनन् ।
अहिले एमसिसीको विषयमा सरकारमा भएको पार्टीका नेताहरु नै मिडियामा आइरहेका छन्, लडाइँ र झगडा गरिरहेका छन् । पार्टीगत रुपमा आफ्नो स्ट्यान्ड कहाँ हुने भनेर छलफलमा उनीहरु जुटिरहेका छन् । तर, एमसिसीको प्रसंग आएको यतिका समयपछि उनीहरु पनि अध्ययन नगरी बोलिरहेका छन् । यसले हाम्रो समाजको छाया प्रतिविम्ब गर्छ । र, निश्चित छ, यो कुरा कुनै हालतमा राम्रो हुनै सक्दैन ।